ဆီးချိုရှိလား ....... မာလကာသီး စားပါ။ - Hello Sayarwon
ဆီးချို ရှိတယ်ဆိုရင် ဘာစားစား သေချာလေး ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အစားမှားတာနဲ့ သွေးချိုမြင့်သွားလို့ပါ။ သွေးချို ခဏခဏ တက်တာက ရေရှည်မှာ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်တာ အပါအဝင် ဆီးချို နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ဘာစားစား ဂရုစိုက်နေရတဲ့ ဆီးချိုရှိသူတွေမှာ သစ်သီးစားမယ်ဆိုရင်လည်း အတော်လေး ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ အချို့သော သစ်သီးတွေက သွေးချို တက်စေနိုင်လို့လေ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဆီးချို ရှိသူတွေနဲ့ တည့်ရုံတင် မဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အကျိုးပြုပေးနိုင်တဲ့ အသီးလေး တစ်ခု အကြောင်း နဲ့ ဒီ အသီးလေးက ဆီးချိုရှိသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ထောက်ကူပေးလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
မာလကာသီးမှာ ဘယ်လို အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေလဲ ……..
ဆီးချို ရှိသူတွေနဲ့ တည့်တဲ့ မာလကာသီးလေးမှာ အခုလို အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
copper တို့ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် ကျန်းမာရေးကို ထောက်ကူပေးတဲ့ အခြားသော အာဟာရဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
ဆီးချိုရှိလား ……. မာလကာသီး စားပါ။
ဆီးချိုရှိလား ……. မာလကာသီး စားပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရတာလဲ ……. မာလကာသီးက ဆီးချိုရှိသူတွေကို ဘယ်လို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပေးစွမ်းလဲ ဆိုတာကို အတူတူ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ဆီးချို ရှိသူတွေအနေနဲ့ မာလကာသီး စားမယ်ဆိုရင် အခုလို အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ ရရှိနိုင်မှာပါ။
သွေးတွင်း အချိုဓာတ် ကျစေနိုင်တယ်
မာလကာသီးက သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ရုတ်တရက် မြင့်တက်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အစားအစာ စားပြီးချိန်မှာ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ တိုးစေနိုင်တာကြောင့် ရုတ်တရက် သွေးချို မြင့်တက်တာမျိုး ဖြစ်မှာကို မစိုးရိမ်ရပါဘူး။
မာလကာသီးက အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ရုတ်တရက် မြင့်တက်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးသလို အစာခြေစနစ် ကျန်းမာစေဖို့လည်း အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းချုပ်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်
မာလကာသီးမှာ အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာက အူနံရံတွေကို ကျန်းမာစေပြီး အူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ကောင်းစေပါတယ်။ ဝမ်းမှန်စေပြီး အူမကြီး သန့်စင်စေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
အဆာခံ စေနိုင်တာကြောင့် ခဏခဏ ဆာပြီး စားမိတာကြောင့်လည်း သွေးချို တက်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ထောက်ကူပေးပါသေးတယ်။
ကယ်လ်လိုရီ ပါဝင်မှု နည်းပါတယ်
ကယ်လ်လိုရီ ပါဝင်မှု နည်းတာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းညှိနိုင်စေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။ ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက် များနေတာကလည်း သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို မြင့်တက်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်း တစ်ရပ်ပါ။
နောက်တစ်ချက်က မာလကာသီးက ရေဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိဖို့ရော ကိုယ်အလေးချိန်ကိုပါ ထိန်းညှိနိုင်စေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးမှာပါ။
ဆိုဒီယမ် ပါဝင်မှု နည်းပြီး ပိုတက်ဆီယမ် ပါဝင်မှု များပါတယ်
ဆိုဒီယမ် ပါဝင်မှု နည်းတာကြောင့် သွေးပေါင်ချိန် မြင့်တက်တာမျိုး မဖြစ်အောင် ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ပိုတက်ဆီယမ် ပါဝင်နေတာကလည်း မာလကာသီးရဲ့ ကျန်းမာရေး အာနိသင်တစ်ရပ်ပါ။
မာလကာသီးက လိမ္မော်သီးထက် ဗီတာမင် C ပါဝင်မှု ၄ ဆ ပိုများပါတယ်။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့ အားဖြည့်ပေးသလို ခန္ဓာကိုယ်ကို ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကြောင့် နာတာရှည်ရောဂါ မဖြစ်စေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အခုလို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ များတာကြောင့် ဆီးချိုရှိလား ……. မာလကာသီး စားပါ။ လို့ ပြောရတာပါ။ ဆီးချို ရှိသူတွေအနေနဲ့ မာလကာသီးကို ပုံမှန်လေး စားသုံးပေးလို့ ရပါတယ်။ သတိထားရမှာက အလွန်အကျွံ မစားမိဖို့ရယ်၊ ထမင်းစားပြီးပြီးချင်း မစားမိဖို့ရယ်ပါ။ ဆီးချို မတက်အောင် ထမင်းစားပြီး ၂နာရီကျော်မှ စားပေးသင့်ပါတယ်။
Guavas For Diabetes https://www.hellodox.com/tip/guavas-for-diabetes-5-reasons-why-you-must-eat-more-guavas-to-manage-blood-sugar/5786 Accessed Date 22 November 2021
Guavas For Diabetes:5Reasons Why You Must Eat More Guavas To Manage Blood Sugar https://food.ndtv.com/food-drinks/guavas-for-diabetes-5-reasons-why-you-must-eat-more-guavas-this-winter-season-2117870 Accessed Date 22 November 2021